အသက်အရွယ် 22 - PIED ဖြေရှင်း: - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် Motivation တက်သည်အာရုံစိုက်အိပ်စက်ခြင်းတိုးတက်ခဲ့ပြီးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်
အသက် ၂၂ - PIED ကိုအဖြေ: လှုံ့ဆော်မှုသည်တက်သည်၊
ငါအင်တာနက် porn ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရတဲ့အခါ 'အိုး၊ ဒီဟာကြောက်စရာကောင်းတယ် !!' ငါ fapping အတွက်နန်းသက်ခြင်းငှါထွက်သွား။ မိန်းကလေးတစ် ဦး အရ, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်နေတာခံရဖို့ပိုပြီးကျန်းမာကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငါလုံးဝမေ့မေ့လျော့လျော့ဖြစ်ခဲ့သည်
တစ်ဦးအပြုသဘောလေးစားမှုအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ငါ့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တစုံတခုကိုမျှ ... ဖတ်နေရေးသားခြင်း, တစ်ဦးဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသို့မဟုတ်တူရိယာကစားရန်သင်ယူခြင်းနှင့်တူ။
ဒါကြောင့်ရက်ပေါင်း ၉၀ ရောက်ပြီ၊ ဒါပေမယ့်မလွယ်ဘူး၊ ရက် ၃၀ လောက်သက်သောင့်သက်သာနဲ့ရနိုင်ပြီးအနီးကပ်ခေါ်ဆိုမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။ သို့သော်လည်းမကြာသေးမီကရက်ပေါင်း ၇၀ ကျော်တွင်ကျွန်ုပ်သည်တကယ့်ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းချက်အချို့ရရှိခဲ့သည်။ ငါအသက်နှစ်ဆယ်ကျော်ပြီ၊ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကတည်းက PMOing ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ငါကျောင်းတွင်ညအိပ်နေစဉ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုပုံမှန်ကစားလေ့ရှိသော်လည်းအားကစားနှင့်တစ်သက်တာလုံးကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ငါမူကားအထက်တန်းကျောင်းနှင့်ကောလိပ်၌ရှိစဉ် PMO နှင့်ဂိမ်းများသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာသည်။ ပိုပြီးမကြာခဏအိမ်သူအိမ်သားထွက်ကြိုးစားရန်ကောင်းတဲ့ခဲ့သည်။ ငါအမြဲတမ်းဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ငါ့ကျောင်းကလူတိုင်းကအဲဒါကိုလုပ်နေကြတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ငါမှားပြီလို့ပြောလိမ့်မယ်။
သင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းအပေါ် screen ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်အမင်းအထောက်အကူပြုသော၊ YBOP နှင့် nofap ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် YBOP နှင့် nofap တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ခက်ခဲသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ လျစ်လျူရှု ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကသင့်ကိုအများကြီးသင်ပေးပြီး၎င်းတည်ရှိမှုကိုကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ nofap ရဲ့အယူအဆတစ်ခုလုံးကရှေ့ဆောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​porn မှာပြaနာမရှိဘူးလို့လူအများယုံကြည်ထားဆဲဖြစ်ပေမယ့်မကြာသေးမီအချိန်ကသက်သေအထောက်အထားတွေပိုများလာတယ် ဆန့်ကျင်ဘက်အကြံပြုထွက်လာမယ့်။ ငါစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာတောင်မသိခဲ့ဘူး၊ တစ်ပတ်မှာအကြိမ်များစွာ PMO ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုငါသိတဲ့အတိုင်းစွဲလမ်းမှုကအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးငါနှင့်အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောအလေ့အထကိုပုံဖော်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
သင်အသုံး ၀ င်သောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ခြင်းဖြင့်တက်နိုင်သည့်သင်၏အချိန်အတော်အတန်ကြာသောညစ်ညမ်းမှုသာမကသင်အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်စဉ်တွင်သင်ကြည့်နေသည့်အရာသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ပြီး၊ ဤအရာသည်အမှန်တကယ်လိင်ဖြစ်နိုင်သည်၊ မဆိုပိုကောင်းသိကြဘူး။ အထက်တန်းကျောင်းမှာမိန်းကလေးတွေကကျွန်တော့်ကိုစကားပြောဖို့ကြိုးစားကြတယ်၊ ငါအရမ်းကြိုးစားအားထုတ်တယ်၊ မိန်းကလေးတွေကလိင်အတွက်အသုံးဝင်တယ်၊ ငါကအိမ်မှာပဲအဝေးကိုထွက်သွားတာပဲ ... သင်အသက်ကြီးလာရင်မင်းရတယ် အပြာသည်လိင်ကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမှသင်ခန်းစာယူခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်သင်ကဲ့သို့သောလူများဖြစ်သည်။
PMO မှာမဲမှောင်နေတဲ့အရာရှိပြီးသင့်ရဲ့ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲရုံသာမကမိန်းကလေးတွေအတွက်ခက်ခဲအောင်တောင်ခက်ခဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်လာတယ်။ PMO နှင့်အတူ - အစစ်အမှန်ဘဝ၌မိန်းကလေးများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ လူငယ်တစ်ယောက်အတွက်တော့ဒါကကြောက်စရာကောင်းတယ်။ မင်းအဲဒီလိုမကြုံဖူးဘူးဆိုရင်မင်းကလူဟောင်းတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာမင်းကြားဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အသက် ၂၀ လောက်မှာဖြစ်ပျက်နေတာလား? အဲဒါဘာလဲ ငါဟာဆရာဝန်ဆီကိုသွားတယ်၊ သူကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုစိုးရိမ်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ သူကငါ့ကို Viagra နဲ့ငါ့ကိုပေးခဲ့တယ်၊ ငါကအဲ့ဒါတောင်မှအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သံသယဝင်တယ်။ မင်းဟာမိန်းကလေးတွေအတွက်ဘာကြောင့်မခဲယဉ်းတာကိုမင်းမသိဘူးဆိုရင်အရမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ် တကယ်တော့၊ သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်သင်၏လိင်ကဲ့သို့သောအချို့သောသင်ထင်ထားသည့်အခြေခံအရာများကိုပင်စတင်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်၊ အမှန်တကယ်ပင်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်သည်။
ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ကိုလပေါင်းများစွာရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် PIED ပြtheနာဖြစ်သည်ကိုမသိသောကြောင့်ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအခွင့်အလမ်းကောင်းရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ် Viagra ကိုအသုံးမပြုတော့သော်လည်း packet နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကဲ့သို့ပင် အကယ်၍ သင်၏ ဦး နှောက်သည်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်သင်၏လိင်တံသို့အချက်အလက်များပေးပို့ခြင်းမရှိပါက Viagra သည်သင့်အားမယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်အဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ yourbrainonporn.com နှင့်လူငယ်များထံမှအကောင့်များအားလုံးကျွန်ုပ်၏ရောဂါလက္ခဏာများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်တူညီသောနေရာတွင်ရှိသည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါခံစားခဲ့ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမှတ်မိသေးတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါဟာသဘာဝတရားနဲ့မကိုက်ညီတော့ဘူး၊ ငါလိုတခြားယောက်ျားတွေလည်းရှိတယ်၊ ငါလိုမျိုးမယုံနိုင်လောက်အောင်ပုံပြင်တွေ။ ဒီလူတွေအားလုံးနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိရလို့နှစ်သိမ့်မှုရခဲ့တယ် ကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရင်တောင်မှကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီယူရီကာအခိုက်အတန့်လေးမှာကျွန်တော်အခုထိရှိနေဆဲပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ငါဟာဒီလောက်ကြာခဲ့ပါပြီ။ YBOP မှတစ်ဆင့် nofap ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး PMO မပါဘဲဘဝကိုအောင်မြင်ရန်အထောက်အကူပြုသောအခြားပုံပြင်များနှင့်အကြံပေးချက်အနည်းငယ်ကိုကြားရသောအခါကျွန်ုပ်သည်ရှိရင်းစွဲ PIED ဖြစ်သည်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။
ဤဗီဒီယိုအားရှင်းပြသက်ရောက်မှု porn မှာအထူးသဖြင့်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်အမည်ရ PIED ကြောင့်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများထဲမှာကရှင်းပြသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်ပေါ်ရှိပါတယ်: https://www.youtube.com/watch?v=EHHyt6z0osA ဗီဒီယိုလူပျိုတို့အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အသစ်ကဖြစ်ရပ်ဆန်းသို့ delves ။
ငါ nofap ကိုရှာတွေ့တဲ့နေ့ကစပြီး PMO ကိုငါ့ဘဝကနေ PMO ကိုအမြစ်ပြတ်အောင်ဖြုတ်ပစ်နိုင်ခဲ့တာဟာငါထွက်ခွာသွားရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကအရမ်းပြင်းထန်လွန်းလို့၊ သင်ဂရုစိုက်ခဲ့တဲ့ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။ နောက်ကျောကြောင်းအခြေအနေသို့သွားလမ်းမရှိသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအသစ်ငါအွန်လိုင်းအဝတ်အချည်းစည်းဓါတ်ပုံတွေကိုတစေ့တစောင်းသို့မဟုတ်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်၏စိတ်ကူးပင်ဖျော်ဖြေဖို့သွားမသွားဘူး။ သိသာထင်ရှားတဲ့အဲဒီမှာ nofap မှထွက်ခွာသွားဖို့အကြောင်းပြချက်ရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အမှန်တကယ်ကြီးမြတ်ပါ၏ ငါ့အဘို့သူတို့သာအောင်မြင်မှုချိုပါစေ။ ယောက်ျားအချို့ကမင်းကမင်းတို့အမျိုးသမီးတွေရဖို့အတွက် nofap ကိုမစတင်သင့်ဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်။ ဒါကကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်ပဲ။ ဒါပေမယ့်မင်းကမိန်းကလေးတွေကိုချစ်ခင်တွယ်တာချင်တဲ့အတွက် nofap ကိုစတင်မယ်ဆိုရင်ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်။ nofapping မှတဆင့်သင်ကန ဦး ရည်ရွယ်ချက်များကိုမိန်းကလေးများရရန်တောင်မှသင်အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကိုကြွယ်ဝစေလိမ့်မည်။ သင်၏အသားအရေကြည်လင်လာလိမ့်မည်၊ သင်၏အိပ်စက်ခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလာလိမ့်မည်၊ သင့်စိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာလိမ့်မည်၊ စွမ်းအင်တိုးလာလိမ့်မည်၊ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်၊ သင့်ရဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့ပြဌာန်းခွင့်တွေတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝနဲ့ဂီတအပေါ်သင့်ရဲ့တန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤစရိုက်များအပြောင်းအလဲသည် 'စူပါပါဝါ' များကဲ့သို့ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်သတိမပြုမိသော်လည်းသင်၏ nofap ခရီးစဉ်အတွင်းဤတိုးတက်မှုအနည်းငယ်သည်ကြီးမားသောခြားနားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သောအပတ်ကကျွန်ုပ်သတိထားမိသည့်ရက်ပေါင်း ၉၀ အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်အာရုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးပြproblemsနာများကိုအမှန်တကယ်လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအိပ်မောကျနေခဲ့ပြီးသုံးနှစ်ခန့်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးအောက်မှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းများသည်နောက်ဆုံး၌မှေးမှိန်သွားခဲ့သည်။ ငါ၏အတိုးတက်မှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါတယ်။ ငါသည်လည်းစွမ်းအင်ပိုရှိပြီးနံနက်ယံ၌အိပ်ရာမှထရန်လှုံ့ဆော်မှုများစွာရှိသည်။ မင်းကမိန်းကလေးတွေကိုပိုပြီးသတိထားမိပြီးစကားပြောဖို့အခွင့်အလမ်းကိုရှောင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်လက်ရှိရည်းစားရှိပြီးသူမသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် PMOing ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုဘယ်တော့မျှမရရှိနိုင်ကြောင်းငါသိ၏။ မိန်းကလေးများရခြင်းမှာသင်မိန်းကလေးများနှင့်သဘာဝစကားပြောနိုင်သည့်အခြေအနေမျိုး၌ရှိနေသည်ကိုသင်တွေ့ရှိရပြီး၊ သင် fapping ဖြစ်နေသောအခါသင်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလိုချင်သော်လည်းမည်သည့်အရာမှလုပ်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏အစောပိုင်းနှစ်များ၌ကျွန်ုပ်၏ PMO အလေ့အထများအကြောင်းကိုသူမတစ်ခါမျှမပြောခဲ့သော်လည်းသူမနားလည်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ငါသူမနမ်းနမ်းရှုပ်ထွေးနေချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်မဆက်ဆံသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အတိတ်ကာလကမရှိခဲ့သည့်နေရာကိုကျွန်တော်သေချာပေါက်လှည့်စားခဲ့သည်မှာအံ့သြစရာဖြစ်သည်။
PMO ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အလေးအနက်ထားလျှင် nofappers ကိုကျွန်ုပ်အကြံပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်က porn နှင့် masturbation ကိုအလေးအနက်ဖျက်လိုလျှင်သင်ယူရန်လိုအပ်သည့်ရပ်တည်ချက်ဖြစ်သောကြောင့် 'အလေးအနက်' ဆိုသည်ကိုပြောနိုင်သည်။ ဘဝ, သင်လိမ့်မယ်။ ဟင်နရီဖို့ဒ်ပြောခဲ့သလိုပဲသင်လုပ်နိုင်သည်ဟုထင်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်ထင်သည်ဖြစ်စေ၊ မလုပ်နိုင်သည်ထင်သည် - သင်မှန်ပါသည်။ "
မည်သည့်အစပျိုးပျော်ရွှင်သောရုပ်ပုံများကိုမဆိုမကြည့်ပါနှင့်၊ reddit၊ Facebook၊ twitter သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်မှတစ်ခုခု၊ မည်သည့် tits ကိုမျှခွင့်မပြုပါနှင့်။
အားကစားခန်းမသို့သွားရန်, စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအကြှနျုပျအဘို့ဤမျှလောက်သော့ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ငါ deadlifts, ကီထိုင်ခြင်းနှင့်ခုံတန်းရှည်များကဲ့သို့အများအားဖြင့်ဒြပ်ပေါင်းပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကတခြားပစ္စည်းပစ္စယ interoperate ငါ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်။
အပြေး, ငါသည်ဤအားကစားရုံနှင့်အတူပြောရလျှင်မထင်, ဒီငါ့အပေါ်မှာကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, သင်ကောင်းသော 20 မိနစ်အဘို့အပြေးပြီးနောက်သင်အမှန်တကယ် buzz ရ။ အဲဒီအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်။ primal တစ်ခုခုရှိတယ်။ ကြွက်သားအမျှင်များမြန်မြန်ဆန်ဆန်လန့်နိုးလာစေရန် Sprinting ကိုကျွန်တော်အထူးနှစ်သက်ပါတယ်။
စောစောထပါ။ အကယ်၍ သင်၏အိပ်စက်ခြင်းပုံစံသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါကနေ့လယ်ပိုင်းတွင်နှိုးထပြီးနေ့တစ်ဝက်ကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။ နံနက်စောစောအိပ်ရာနိုးရန်အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်နေတစ်ကြိမ်က Playstation ပိတ်ထားပါ။
တစ်ခုခုသင်ယူပါ: ငါ့အဘို့ငါဘာသာစကားကိုသင်ယူဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြ, ဒီ, ကအရာသည်သင်၏စိတ်ကိုငရဲအဖြစ်ခက်ခဲပေမယ့်ကြိုးကြာနေသည်။
သငျသညျလူငယ်တစ်ဦး nofapper သို့မဟုတ်ကောလိပ်၌ရှိကြ၏လျှင်, သင်သည်သင်၏အဆင့်ကိုတက်စောင့်ရှောက်သေချာခက်ခဲလေ့လာမှုလုပ်ပါကအသက်တာ၌နောက်ပိုင်းမှာအရေးပါပါလိမ့်မယ်။
အေးမြတဲ့ရေပန်း, ဒါကပထမ ဦး ဆုံးအရာအတွက် nofapping များအတွက်အကောင်းတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်။
သင်၏မိဘ / မိသားစုကိုကူညီပါ။ မင်းကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပဲရတယ်။ ငါဟာမိဘတွေနဲ့အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
အစားအစာ, ငါကြွက်သားရဖို့နှင့်ပိန်နေဖို့ကြိုးစားနေ, ဒါကြောင့်ငါအများကြီးနှင့်ပရိုတိန်းအစာအမြောက်အများကိုစားရတယ်။ ငါဟာသိပ်အရေးမကြီးဘူး၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလတာကာလအတွင်းမှာငါဟာလေးနက်တဲ့အမြတ်အစွန်းတွေရခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ယေဘုယျအတွေးအခေါ်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်သည် shit ကိုစားရန်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင်ကျွန်ုပ်၏ ၅ ကြိမ်ရရှိရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ ပီဇာရှိပါက၎င်းသည်ချိုမှုန့်နှင့်ပဲများပါ ၀ င်လျှင်သို့မဟုတ်ဘာဂါနှင့်ကြော်ရှိပါကခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးနှင့်ဆလတ်နှင့်အတူဖြစ်သည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှဤဗီတာမင်များကိုလိုအပ်ပြီး၎င်းသည်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ သငျသညျအရွယ်အစားရချင်လျှင်၏သင်တန်းသင့်ရဲ့ကယ်လိုရီပိုလျှံ run နှင့်အပြန်အလှန်သေချာပါစေ။
, ဆငျခွငျဒီတွေအများကြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့ထားပြီးကျွန်မအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာကျွန်မစိတ်ကိုရှင်းလင်းဘယ်တော့မှနိုငျသညျ, အတှေးအဖွင့်မဆုတ်မနစ်ကျော် ticking ။ ဘာဝနာစိတ်အတွေး၏လုံးဝရှင်းပါတယ်နဲ့ကျွန်မလုံးဝအာရုံစိုက်ဖြစ်ကြောင်းကိုအနည်းငယ်ကပ်ကာလ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ အရင်ကဆိုရင်များအတွက် youtube ကအပေါ်အချို့သောကောင်းသောဗီဒီယိုများရှိပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်မသေချာဘူး၊ ဒီဟာကိုဝါကျတစ်ကြောင်းအဖြစ်သာသတ်မှတ်ထားပေမယ့်စာစီစာကုံးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ ဒီဝေးကိုဝေးဖတ်ပါသူမည်သူမဆိုမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်မေးခွန်းများမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုသတင်းပေးပို့ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီ post အောက်မှာမှတ်ချက်ပေးပါ။ သူတို့ရဲ့ပုံပြင်များ၊ အကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေပါ။
LINK - 90 ရက်ပေါင်းရောက်ရှိ !! nofap နှင့် PIED အားဖြင့်, ငါ၏ခရီး